I-Netra Visual Intelligence: Gada Umkhiqizo Wakho Kubukeka Ku-inthanethi | Martech Zone
INetra yisiqalo esakha ubuchwepheshe bokwamukelwa kwezithombe okususelwa ocwaningweni lwe-AI / Deep Learning olwenziwe eMIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. Isoftware kaNetra iletha ukwakheka ezithombeni ebezingahlelwanga phambilini ngokucaca okumangazayo. Ngaphakathi kwama-millisecond angama-400, abakwaNetra bangamaka isithombe esiskeniwe sama-brand logo, isimo sesithombe, nezici zobuso bomuntu.
Abathengi babelana ngezithombe eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-3.5 ezinkundleni zokuxhumana nsuku zonke. Ngaphakathi kwezithombe ezabiwe emphakathini kunokuqonda okubalulekile mayelana nemisebenzi yabathengi, izintshisekelo zabo, izintandokazi zomkhiqizo, ubudlelwano, nemicimbi ebalulekile yempilo.
Kwa-Netra, sisebenzisa i-AI, umbono wekhompyutha, kanye nokufunda okujulile ukusiza abathengisi ukuthi baqonde kangcono lokho abathengi ababelana ngakho kakade; ubuchwepheshe bethu bungafunda izithombe ngezinga elikhulu ebelingenzeki phambilini. Ukuze sifeze lokhu, siqala ngesampula sezithombe ezitholakala ku-inthanethi eziqukethe uphawu oluthile. Sibe sesithatha, sithi, ilogo yeStarbucks, bese siyiguqula ngezindlela ezahlukahlukene zokwenza isethi yokuqeqeshwa ezovumela ubuchwepheshe ukuthi babone amalogo weStarbucks asontekile, noma ezigcawini ezinabantu abaningi njengesitolo sekhofi. Ngemuva kwalokho siqeqesha amamodeli ekhompyutha sisebenzisa inhlanganisela yokuqukethwe okuphilayo kanye nezithombe eziguqulwe ngokwenziwa. URichard Lee, oyi-CEO, uNetra
Ngezansi kunesibonelo sesithombe isoftware yeNetra efake kusuka kuTumblr. Noma ngabe amazwibela awasho I-North FaceIsoftware yakwaNetra iyakwazi ukuskena isithombe bese ibona ubukhona be logo phakathi kwezinye izinto ezithakazelisayo, kufaka phakathi:
Izinto, izigcawu, nemisebenzi efana ne-Mountaineering, Summit, Adventure, Snow ne-Winter
Ilogo yomkhiqizo weNorth Face enokuzethemba okungama-99%
INetra inikeza amakhasimende ukufinyelela kudeshibhodi esuselwa kuwebhu ukuze alayishe izithombe kanye / noma ahlaziye izithombe zomphakathi ezitholwe kuTwitter, Tumblr, Pinterest, naku-Instagram. Isoftware iyatholakala ngokuthengisa kumakhasimende ngedeshibhodi esekwe kuwebhu noma API yezinkampani zesoftware yamabhizinisi. Ubuchwepheshe obuphambili beNetra bungasetshenziswa futhi kubandakanya ukufaka inkomba kwezithombe nokusesha (ukuphathwa kwempahla yedijithali) nokuseshwa okubukwayo.
Abasebenzisi bangabuka analytics kumathegi wesithombe bese uphendula imibuzo ebalulekile njenge:
Uphi umkhiqizo wami ovela ezithombeni futhi ekumuphi umongo?
Yiziphi izibalo zabantu ezibandakanya umkhiqizo wami ezithombeni?
Yiziphi izibalo zabantu ezibandakanya nemikhiqizo yalabo engincintisana nabo?
Yimiphi imisebenzi / imikhiqizo abathengi abazibandakanya nomkhiqizo wami abanesithakazelo kuyo?
Abasebenzisi bangahlunga izithombe ngokuya ngamazinga wokuzibandakanya nomongo wesithombe. INetra futhi inamandla okwenza izithameli ngokwezifiso ngokuya ngokuqukethwe okuthunyelwe ngaphakathi kwezithombe zezokuxhumana. Isibonelo, uReebok angasebenzisa isoftware ukukhomba abathengi abasebenza ngokuzikhandla yi-Crossfit ebhekiswe kubathengi abathumele izithombe zabo bezivivinya emavikini amabili edlule.
Sikholelwa ukuthi sinobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme emakethe yokuthola uphawu neyophawu. Siphinde sizihlukanise ngokwengeziwe ngamakhono wokubona isithombe. Kukhona enye inkampani eyodwa kuphela engenza ama-brand, ama-logo, izinto, izigcawu nabantu, futhi yi-Google leyo. Ehlokweni lethu ekuhlolweni kwekhanda, senza okungcono okuphindwe kabili kunabo. Isixazululo sobuhlakani esibonakalayo seNetra singanikeza ngemininingwane ebaluleke kakhulu ukukhulisa imininingwane ekhona yabathengi (isb. Imininingwane yephrofayili, amagama-ncazo wombhalo, idatha yamakhukhi) abakhangisi bezenhlalo asebevele beyisebenzisa. URichard Lee, oyi-CEO, uNetra
Izicelo ezingokoqobo zifaka ukuqapha umkhiqizo, ukulalela umphakathi, ukumela umphakathi, ukumaketha okunomthelela, ucwaningo lokumaketha kanye nokukhangisa.
Cela Ukufinyelela kuNetra
Tags: aiukuqapha umkhiqizoukufunda okujulileukuqashelwa kobusoukuqashelwa kwesithombeinstagramukufunda imishiniI-netraPinterestukuphrofayelaukuqashelwareebokubuso basenyakathotumblrTwitterukubonwa kwesithombe okubukwayoukusesha okubukwayo
I-ConnectLeader TopRung: Ithuluzi Lokuthengisa le-B2B neThuluzi Lokuphatha Ukusebenza